यिनै हुन् १७ बर्षिया सर्मिला गिरी जसको च’ट्याङ लागेर मृ’त्यु! – Online Khabar 24
यिनै हुन् १७ बर्षिया सर्मिला गिरी जसको च’ट्याङ लागेर मृ’त्यु!
च’ट्याङ लागेर जाजरकोटमा एक किशोरीको मृ’त्यु भएको छ।
घरमा बसिरहेको अवस्थामा एक्कासी परेको च’ट्याङले बारेकोट गाँउपालिका १ रामीडाँडा निवासी १७ बर्षिया सर्मिला गिरीको मृ’त्यु भएको गाँउपालिका अध्यक्ष महेन्द्र शाहले जानकारी दिए। च’ट्याङ लागेर गिरीको घ’टना स्थलमै मृ’त्यु भएको अध्यक्ष शाहले बताए।
यस्तै,प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई मन्त्रिपरिषद् विस्तारमा एकपछि अर्को सकस पर्दै गएको छ । २९ असारमा सर्वोच्च अदालतको परमादेशबाट प्रधानमन्त्री पदमा नियुक्त भएका देउवाले दुई महिना बित्दा पनि सरकारलाई पूर्णता दिन सकेका छैनन् ।
देउवा नेपाली कांग्रेस, माओवादी केन्द्र, जसपा र माधव नेपालको तत्कालीन एमालेको समूह र राष्ट्रिय जनमोर्चाको सहयोगमा प्रधानमन्त्री बनेका थिए । मन्त्रिपरिषद्ले पूर्णता नपाउँदा सरकारको आलोचना दिनदिनै बढ्दो छ ।
प्रधानमन्त्री देउवाले सरकारको आलोचना बढेको भन्दै गठबन्धन आबद्ध दलबाट मन्त्रीका लागि नाम पठाउन पटकपटक शीर्ष नेताहरूलाई आग्रहसमेत गर्दै आएका छन् । उनले गत बिहीबारबाट भने निरन्तरजसो गठबन्धन बैठकमा मन्त्रीको लिस्ट दिन नेताहरूलाई आग्रह गरिरहेका छन् ।
पाँच दलीय गठबन्धनबाट प्रधानमन्त्री बनेका देउवाले दुई महिनासम्म पनि पाँच जना नै मन्त्रीका भरमा सरकारलाई अघि बढाइरहेका छन् । त्यसमा पनि एक जना भने राज्यमन्त्री छन् । प्रधानमन्त्रीसहित गर्दा सरकार ६ सदस्यीय मात्रै छ । साभार गरियको खबर
Prevटिकटककै कारण सेतिले लग्यो ? सँगै गएका २ जना साथीहरु यस्तो भन्छन ? (भिडियो)
nextमलाई पनि विवाह गर्ने रहर जागिसक्यो !